Wasaaradda caafimaadka oo mamnuucday in laga qaybgalo shirarka Hay’aduhu ku qabtaan Nairobi. – Radio Daljir
Wasaaradda caafimaadka oo mamnuucday in laga qaybgalo shirarka Hay’aduhu ku qabtaan Nairobi.
Maajo 25, 2019 7:11 g 0
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaarada caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha wasaarada caafimaadka Soomaaliyeed iyo wakiilo ka socda wasaaradu aysan ka qayb geli doonin shirar iyo aqoon is waydaarsiyo qorshaysnaa inay ka dhacaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warqadan oo uu ku saxeexnaa agaasimaha guud ee wasaarada caafimaadka iyo adeegyada bulshada Dr. Cabdilaahi Xaashi taasoo lagu socodsiiyey Hay’adaha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka iyo bedqabka dadka Soomaaliyeed iyo deeq bixiyayaasha caalamiga ah ayaa lagu yiri.
“Kadib dhacdooyinkii u danbeeyey ee arimaha socdaalka oo ka dhacay Nairobi wasaarada caafimaadka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa saaxibadeeda iyo beesha caalamka in wax wakiilo ah oo ka socda wasaaradu aysan imaan doonin dhamaan kulamada, aqoon is waydaarsiyada iyo tababaradii qorshaysnaa inay ka dhacaan magaalada Nairobi.”
Warqada oo faahfaahsan ayaa lagu sheegay in carqalad dhanka socdaalka ah oo jirta awgeed aysan shaqaalaha wasaaradu tegi doonin magaalada Nairobi.
“Wasaaradu waxay dhiirigelinaysaa in lagu qabto dhamaan waxqabadyadaasi gudaha dalka ama loo wareejiyo dalal kale oo ay shaqaalaheena u fududahay inay u socdaalaan”, ayaa lagu yiri wargelinta wasaaradu u dirtay Hay’adaha.
Ugu danbayn ayay wasaaradu qoraalkeeda ku bogaadisey saaxiibada Soomaaliya oo dhinacyo badan ka taageera wasaaradda caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee Soomaaliya.
Madaxweyne Deni oo magacaabay Guddiga dib u habeynta Hay’addaha dowladda ee gobolka Mudug